အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: 10/01/2011 - 11/01/2011
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, October 31, 2011 Monday, October 31, 2011 Labels: သုတအဖြာဖြာ
အရောင်တွေရဲ့ ကဏ္ဍဟာ လူသားတွေရဲ့ ဘဝထဲမှာ အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် နေရာယူခဲ့ကြတာ ဟိုးရှေးခေတ်ကတည်းက ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ် ကလေးဘဝမှာလည်း အသိဥာဏ်ကလေးတွေ ရှိလာပြီဆိုတာနဲ့ အိမ်က လူကြီးမိဘတွေဟာ ကလေးတွေကို အရောင်လေးတွေ စပြီး သင်ကြားပေးတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အရောင်ကို ခွဲခြားနားလည်တတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သိသာတဲ့ အကြောင်းချက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်တွေမှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ သင်္ကေတနဲ့ ထူးခြားချက်များ ရှိနေပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ သူနှစ်သက်တဲ့ အရောင်ကို သိခဲ့ရင် သူ့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား တစ်ပိုင်းတစ်စကိုတောင် ခန့်မှန်းလို့ ရနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြတဲ့အထိ အရောင်တွေရဲ့ သက်ရောက်မှုက အင်အားရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အရောင်တွေဟာ ထူးခြားနက်နဲ့တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ တစ်ရောင်ချင်းစီရဲ့ အဓိပ္ပါယ် သင်္ကေတများကို ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်…
အဖြူရောင်ကတော့ အရောင်တွေ အားလုံးထဲမှာ အသန့်စင်ဆုံး၊ အစွန်းအထင်း မခံဆုံး အရောင် ဖြစ်ပါတယ်.. နိုင်ငံတကာမှာ သတို့သမီးတွေဟာ အဖြူရောင်ကို ဝတ်ဆင်တတ်ကြပါတယ်.. အဖြူရောင်ရဲ့ သဘောတရားက အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ အရောင်ဖြစ်တာကြောင့် အပျိုစင်ရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ဖော်ပြနေတဲ့ သဘောလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အချို့သော နိုင်ငံတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအရတော့ အဖြူရောင်ကို အသုဘ နာရေး ကိစ္စတွေမှာ ဝတ်ဆင်ကြပါတယ်။ အဖြူရောင်ဟာ တင်္နလာနေ့ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြူရောင် ဒေစီပန်းဟာ သစ္စာရှိစွာ ချစ်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖော်ညွှန်းပါတယ်.
သူတော်စင်များနဲ့ နတ်သမီးတို့ရဲ့ ဝတ်စုံများကို ကြည်လင်သန့်စင်သော အဖြူရောင်ဝတ်စုံများကို ဝတ်ဆင်တတ်ကြပါတယ်။ အဖြူရောင်ဟာ အေးမြခြင်း သဘောကိုဆောင်ပြီး ရိုးသားခြင်း၊ အပြစ်ကင်းစင်ခြင်း၊ သစ္စာရှိခြင်း၊ ကြည်လင်ဝင်းပခြင်း စသည့်အဓိပ္ပါယ်လည်း ရှိပါတယ်။
ရှုပ်ထွေးခြင်းများ၊ အခက်အခဲများကို ဖယ်ရှားလိုသောအခါ
အနီရောင်ဟာ ရှိသမျှသော အရောင်တွေ အားလုံးထဲမှာ နွေးထွေးမှု အရှိဆုံး အရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အနီရောင်ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နေတတ်သူတွေက နှစ်သက်တတ်ကြပြီး အနီရောင်ရဲ့ အခြားသော အဓိပ္ပါယ်က ဒေါသကြီးခြင်း၊ မုန်းတီးခြင်းတို့ကိုလည်း ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ သို့သော်လည်း တရုတ်ပြည်မှာတော့ ဂုဏ်သရေကြီးခြင်း၊ မင်္ဂလာရှိခြင်းအရောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ နေရာတကာမှာ အနီရောင်ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးရာမင်္ဂလာပွဲတွေမှာ သတို့သမီးဟာ အနီရောင်ကို ဆင်မြန်းလေ့ရှိပြီး အိမ်တွေရဲ့ တံခါးရှေ့၊ အခန်းတံခါး စတဲ့နေရာတွေမှာပါ အနီရောင် စာလုံးတွေ ကပ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
အိန္ဒိယမှာတော့ သန့်စင်ခြင်းအဖြစ် အသုံးပြုပြီး အမေရိကန်မှာတော့ ခရစ္စမတ်အရောင်အဖြစ် အစိမ်းနဲ့ တွဲဖက်ပြီး အသုံးပြုကြသလို ဗယ်လင်တိုင်းအရောင်အဖြစ် ပန်းရောင်နဲ့ တွဲဖက်ကာ အသုံးပြု ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ အနီရောင်နှင်းဆီဟာ ပြင်းပြင်းပြပြ စွဲစွဲလန်းလန်းရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ အနီရောင် ပတ္တမြားလက်စွပ် ကိုတော့ ဘယ်ဘက်လက်မှာ ဝတ်ဆင်သင့်ပြီး အင်္ဂါနေ့ရဲ့ အမှတ်အသားက အနီရောင်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အနီရောင်ဟာ မားစ်ဂြိုလ်ရဲ့ အမှတ် အသားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အနီရောင်ဟာ သွေးရဲ့ အရောင်နဲ့ တူညီတဲ့အတွက် ဘဝရဲ့ရှင်သန်ခြင်း၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားခြင်း တို့အတွက်လည်း အနီရောင်နဲ့ ဖော်ပြပြီးတော့ တပ်မက်ခြင်း၊ တဏှာတို့ကိုလည်း ကိုယ်စားပြုတဲ့ အရောင် ဖစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ အသုံးပြုတဲ့ အလံအားလုံးနီးပါးမှာ (အနည်းငယ်မျှသော အလံမှလွဲ၍ ) အနီရောင် ပါဝင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အနီရောင်ရဲ့ သင်္ကေတဟာ စစ်ပွဲများ၊ အန္တရာယ်ရှိခြင်း တို့ရဲ့ အမှတ်အသားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူ မြင်နိုင်တဲ့ အနီရောင်ကို အချက်ပေး ဆိုင်းဘုဒ်များ၊ မီးသတ်ကား၊ Stop ဆိုင်းပြသည့် နေရာများတို့မှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိစေလိုသောအခါ
ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှု၊ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေမှုတို့ကနေ ကာကွယ်လိုသောအခါ တို့မှာ ဝတ်ဆင် သင့် ပါတယ်။
အပြာရောင်ဟာ မိုးကောင်းကင်၊ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာ၊ အိပ်စက်ခြင်း စသည်တို့ရဲ့ အရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်တွေထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းခြင်း အရှိဆုံး အရောင်ထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်. မြင့်မြတ် သန့်စင်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အရောင်လည်း ဖြစ်တာကြောင့် မယ်တော်မေရီဟာ အပြာရောင်ရဲ့ သင်္ကေတနဲ့ ဖော်ပြကြပါတယ်။ သန့်စင်တဲ့ အပြာရောင်စစ်စစ်ဟာ ဥာဏ်ကွန့်မြူးခြင်း၊ ရိုးသားခြင်း၊ သန့်ရှင်း စင်ကြယ်ခြင်းကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဖော်ပြနေတဲ့အရောင်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ရှေးရိုးဆန်ပြီး အပြောင်းအလဲကို မနှစ်သက်ကြသူတွေဟာ အပြာရောင်ကို ရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်။ အပြာရောင်ဟာ မြင်ရသူတိုင်းကို တည်ငြိမ် အေးချမ်းစေတဲ့အတွက် အိမ်တွေမှာ အသုံးပြုဖို့ သင့်တော်တဲ့အရောင်ဖြစ်ပြီး ညအိပ်ဝတ်စုံနဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးအရောင် ဖြစ်တယ်လို့ အကြံပေးကြပါတယ်။ အပြာရောင် အိုင်းရစ်ပန်းကို မိတ်ဆွေ တစ်ဦးဦးအား လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင် “ မင်းရဲ့ ခင်မင်မှုဟာ ငါ့ဘဝအတွက် သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။
အပြာရောင်ဟာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အရောင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အပြာရောင် ကျောက်မျက် ရတနာတွေဟာ ဝတ်ဆင်တဲ့သူကို တည်ငြိမ်စေပြီး အေးချမ်းစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အပြာရောင် ရှိတဲ့ ကျောက်မျက်တွေကတော့ နီလာ၊ ဥဿဖရား၊ မြပြာ၊ စိန်ပြာ၊ တာကွိုဇ်ကျောက် စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်တွေ ပူလောင်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေလိုတဲ့အခါ
အခြားသောသူများနဲ့ ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေချောမွေ့လိုသောအခါ
အသစ်အသစ်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ကျယ်ပြန့်စွာလေ့လာလိုသောအခါ
တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ အေးအေးချမ်းချမ်း နေထိုင်လိုတဲ့အခါတွေမှာ ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
ခရမ်းရောင်ဟာ.. တရားမျှတခြင်းကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်.. လူတစ်ယောက်ဟာ ခရမ်းရောင်ကို ဝတ်ဆင်ထားမယ်.. ခရမ်းရောင်ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သုံးစွဲသူ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ စိတ်အခြေအနေ ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်. ခရမ်းရောင်ကို တရားထိုင်တဲ့အချိန် ဝတ်ဆင်မယ်ဆိုရင်လည်း စိတ်နှလုံး တည်ငြိမ်မှုကို ရရှိနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခရမ်းရောင်ဟာ ပဉ္စလက်ဆန်ခြင်း၊ လျှို့ဝှက်ခြင်းတို့ရဲ့ သင်္ကေတလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခရမ်းရောင်ဟာ အနီရောင်နဲ့ အပြာရောင်တို့ ပေါင်းစပ်ရာကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ နွေးထွေးပြီး အေးချမ်းစေတဲ့ အရောင်ဖြစ်တာကြောင့် ခရမ်းရောင်ကို မဟာဆန်တဲ့အရောင် လို့လည်း ပြောဆိုတင်စားကြပါတယ်။ ကလေးသူငယ်တွေဟာ ခရမ်းရောင်ကို အကြိုက်များပြီး အနုပညာရှင်တွေ နှစ်သက်တတ်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ အရောင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခရမ်းရောင်ဟာ ကြာသပတေးနေ့ရဲ့ အရောင်ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်သားရပါတယ်။
ဘဝကို ဟန်ချက်ညီညီ ကျော်ဖြတ်လိုတဲ့အခါ
စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းများ ဖြစ်နေသောအခါ စိတ်ခွန်အားတွေ ပြည်လည်ရရှိဖို့ စတဲ့ အခါတွေမှာ ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
ခရမ်းရောင်ကျောက်ကို စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ ထူးခြားကောင်းမွန်စေလိုတဲ့အခါ ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင်ကတော့ သဘာဝကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်တွေထဲမှာ အအေးမြဆုံး၊ ငြိမ်းအေးမှု အရှိဆုံးအရောင်ရယ်လို့လည်း ပြောဆိုကြပါတယ်။ အစိမ်းရောင်ဟာ မိမိကိုယ်ကို လေးစားမှုရှိခြင်း၊ နေထိုင်ရ သက်တောင့်သက်သာ ကောင်းမွန်စွာ ရှိခြင်း၊ ဟန်ချက်ညီခြင်း တို့ရဲ့ သင်္ကေတလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော အဓိပ္ပါယ်များမှာ လေ့လာသင်ယူခြင်း၊ လုံခြုံစိတ်ချခြင်း၊ ရင့်ကျက်ခြင်း၊ သဟဇာတဖြစ်ခြင်း စသည်ဖြင့် များစွာ ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့များ သင်ဟာ တစ်နေရာရာကို သွားဖို့ ဘယ်လိုအရောင်မျိုး ဝင်ဆင်သွားရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ မရခဲ့ရင် အစိမ်းရောင်ကို ရွေးချယ်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်. အစိမ်းရောင်ဟာ ဘယ်လို အခမ်းအနားမျိုး အတွက်မဆို သင့်တော်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင်ဟာ မျက်စိရောဂါကို ကုစားပေးနိုင်တဲ့ အရောင်လို့လည်း ယုံကြည် လက်ခံကြတာကြောင့် အီဂျစ်လူမျိုးတွေဟာ မျက်လုံးအတွက် အစိမ်းရောင်လိုင်နာနဲ့ မျက်ခွံကို အစိမ်းရောင် ယခုထက်တိုင် အသုံးပြုကြဆဲ ရှိပါတယ်။ အစိမ်းရောင် အသီးအရွက်များကို ကျန်းမာရေးအတွက် များများ စားသုံးပေးသင့်ပြီး အစိမ်းရောင် လေ့ကျင့်ခန်း ( ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ရေးပြီး) ကိုလည်း တတ်အားသမျှ အချိန်ပေးပြီး လုပ်သင့် ပါတယ်။ အစိမ်းရောင်ဟာ သောကြာနေ့ရဲ့ အရောင်ဖြစ်ပြီး အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ ကျောက်စိမ်းကို အာရှနိုင်ငံ ( အထူးသဖြင့်. တရုတ်နိုင်ငံ) မှာ အထွတ်အမြတ် ထားပြီး သုံးစွဲကြပါတယ်။ကျောက်စိမ်းကို မကောင်းသော ဘေးရန်မှ ကာကွယ်ဘေးခြင်း ရောဂါဘယများကို ကုစားပေးနိုင်ခြင်းတို့မှာ အစွမ်းထက်တယ်လို့ တရုတ်လူမျိုးတို့က ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုကနေ ကာကွယ်လိုသောအခါတို့မှာ ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
အနက်ရောင်ကတော့ အရောင်တွေအာလုံးထဲမှာ နားလည်ဖို့ အခက်ခဲဆုံး အရောင်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ အနက်ရောင်ကို သေခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ အနက်ရောင်ကို အများအားဖြင့် မကောင်းမှုတွေနဲ့ ယှဉ်တွဲပြီး ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ လူကောင်းနဲ့ လူဆိုးကို ခွဲခြားပြောဆိုရာမှာလည်း အဖြူနဲ့အနက်လို့ နှိုင်းယဉ်ပြီး ပြောတတ်ကြပါတယ်။ အနက်ရောင်ဟာ အလင်းကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်းအရှိဆုံး အရောင်ဖြစ်ပြီး လျှို့ဝှက်နက်နဲမှု အရှိဆုံး အရောင်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ အနက်ရောင်ဟာ စနေနေ့ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အရောင် ဖြစ်ပါတယ်။
အနက်ရောင်မှာ မမြင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားတစ်မျိုးရှိပြီး ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ သိရပြီး ကလေးငယ်တိုင်း မှောင်မဲနေတဲ့ အရောင်မျိုးကို ထိတ်လန့်တတ်ကြပါတယ်.။ သို့သော်လည်း အချို့ကတော့ အနက်ရောင်ဟာ မြေကြီးအရောင် ဖြစ်တာကြောင့် စွမ်းအားရှိပြီး ဘဝကို ဆက်လက် ရှင်သန်ဖို့ ခွန်အားတွေ ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့လည်း သတ်မှတ်ကြပါသေးတယ်။
မသိနိုင်သော တစ်စုံတစ်ရာကို ရင်ဆိုင်ရန်ပြင်ဆင်လိုသောအခါ တို့မှာ ဝတ်ဆင် အသုံးပြုကြပါတယ်။
အဝါရောင်ဟာ အရောင်တွေထဲမှာ ဆွဲဆောင်မှုရှပြီး ဖမ်းစားနိုင်စွမ်းအရှိဆုံး အရောင်ထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်. အဝါရောင်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က တောက်ပခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း၊ စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဝါရောင်ဟာ ကာလာဘလိုင်း (အရောင်ကန်း) ဖြစ်သူတွေအတွက်လည်း အခြားအရောင်တွေထက်စာရင် မြင်ဖို့ အလွယ်ကူဆုံး အရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဝါရောင်ဟာ ထိုးထွင်းတီထွင်မှုနဲ့ ထက်မြက်ခြင်း၊ အတွေးအခေါ် ကြီးမားခြင်း၊ အကောင်းမြင်ခြင်း၊ ဥာဏ်ပညာရှိခြင်း တို့ကိုလည်း ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် လိပ်စာကဒ်ကို အဝါရောင်ဖြင့် ပြုလုပ်လျှင် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။
အာရှနိုင်ငံများမှာ အဝါရောင်ဟာ မြင့်မြတ်ခြင်း၊ တော်ဝင်ခြင်းအဖြစ် သုံးစွဲကြပါတယ်. မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ ရဟန်းသားတော်များရဲ့ သင်္ကန်းဟာ မြင့်မြတ်စင်ကြယ်ခြင်းရဲ့ ကိုယ်စားပြုတဲ့ အဝါရောင် ( ရွှေဝါရောင် ) ဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပမှာတော့ စိတ်ရွှင်လန်းခြင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုလည်း အဝါရောင်နဲ့ ဖော်ပြ တတ်ကြပါတယ်။ အဝါရောင်ဟာ တနင်္ဂနွေကိုယ်စားပြု အရောင်ဖြစ်ပါတယ်..
အဝါရောင် Daffodils ပန်းဟာလည်း ပေးဆပ်ခြင်းနဲ့ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ စစ်တမ်း ကောက်ယူချက်များအရ အမေရိကန်တွေကတော့ နွေးထွေးပြီး နေရောင်ခြည်လို တောက်ပတဲ့ အဝါရောင်မျိုးကို လူကြိုက်များပြီး အဲဒီအရောင်ဟာ နေကြာပန်းရဲ့ အရောင်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဝါရောင် ဖဲကြိုးတွေကို သစ်ပင်မှာ ချည်နှောင်ခြင်းအားဖြင့် အဝေးရောက်နေတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သတိတရအနေနဲ့ လုပ်တာဖြစ်ပြီး ပြန်ရောက်လာဖို့ မျှော်လင့်နေတယ် ဆိုတဲ့ သဘောကို ဖော်ပြနေပါတယ်။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း တုန်လှုပ်ခြင်း မောပန်းခြင်းတို့ကနေ ပြန်လည် သက်သာလိုတဲ့အခါ
မှတ်ဥာဏ်အား ကောင်းစေလိုသောအခါ၊ အာရုံစူးစိုက်မှု လိုချင်သောအခါ
စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း ရာသီဥတု မသာယာခြင်းကြောင့် ထိုင်းမှိုင်းလေးလံခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်တဲ့ အခါမှာ ပျော်ရွှင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ရရှိဖို့ အဝါရောင်ကို ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
အရောင်တွေ အကြောင်း ဖတ်ချင်ပါတယ် ဆိုသူများအတွက် ဖတ်မှတ် လေ့လာထား မိသလောက် ပြန်လည် ဖော်ပြ ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ရောင်စဉ်များကြားမှာ အားလုံးဘဲ ပျော်ရွှင်ကြည်လင်ကြပါစေလို့..
Links to this post 29 comments
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, October 29, 2011 Saturday, October 29, 2011 Labels: အမှတ်တရ
ကျွန်မကို မွေးဖွား ကြီးပြင်းစေခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ ဇာတိ ရွာကလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အရင်ဦးဆုံး ရွာအကြောင်း မပြောခင်မှာ ကျွန်မ မိဘတွေအကြောင်းလည်း အနည်းငယ် ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်မ အင်တာနက်ပေါ်မှာ စာတွေရေးတယ်ဆိုတာ သိတဲ့ ကျွန်မအမေဟာ သူကိုယ်တိုင်လည်း စာရေးစာဖတ် သိပ်ဝါသနာကြီးတော့ သဘောတွေကျပြီး ကျေနပ်လို့နေပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း အမေနဲ့ ဖုန်းပြောတိုင်း ကျွန်မတို့ဒေသရဲ့ အကြောင်းတွေ၊ အစားအသောက် အကြောင်းတွေ ရေးဖို့ တိုက်တွန်းတတ်သလို၊ ဖားကန့်ဒေသမှာ အခါကြီးရက်ကြီး ပွဲလမ်းသဘင်တွေဖြစ်စေ၊ တစ်ခုခု ထူးခြားတာတွေ ရှိလာရင်ဖြစ်စေ “မင်းတို့ အစ်မသာရှိရင် ဓာတ်ပုံရိုက်တော့မှာ။ အခုလည်း ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ထား။ မင်းတို့အစ်မဆီ ပို့ရအောင်” လို့ ပြောတတ်ပြီး အနားမှာရှိတဲ့ မောင်နှမတွေကို ဓာတ်ပုံ အတင်းရိုက်ခိုင်းတတ်ပါတယ်။ ဘလော်ဂါတွေကတော့ သိတဲ့အတိုင်း ရောက်ရာအရပ်မှာ ကင်မရာတကားကားနဲ့ တွေ့သမျှ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာကိုးနော်။ ကျွန်မရဲ့ ညီမအငယ်ဆုံးကလည်း ဘာလေးဘဲဖြစ်ဖြစ် ဓာတ်ပုံရိုက်ထားပြီး ကျွန်မဆီကို ပို့တတ်ပါတယ်။ ကျွန်မပြန်သွားတုန်းက ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေ ၉၀%နှုန်းလောက်က ပျက်စီးကုန်တာမို့ သူတို့ကျေးဇူးနဲ့မို့သာ ဖားကန့်ဒေသအကြောင်း ဓာတ်ပုံတွေ စုံစုံလင်လင်နဲ့ ရေးနိုင်တာပါ။
အဖေကတော့ အနေအေးသူမို့ ကျွန်မ ဘာလုပ်လုပ် ကန့်ကွက်တာတွေ ဘာတွေ မလုပ်သလို ထူးထူးခြားခြားလည်း ဘာမှ ပြောလေ့မရှိပါဘူး. ဒါပေမဲ့ အဖေက ဗဟုသုတသိပ်စုံပါတယ်. ကျွန်မသိလိုတာရှိရင် အဖေကို အမြဲ မေးရပါတယ်. ပြီးတော့လည်း ကျွန်မတို့ရွာကလေးမှာလည်း အဖေက အသက်ကြီးသူ၊ ဗဟုသုတစုံသူ၊ တည်တည်တံ့တံ့ နေတတ်သူ ဖြစ်တာကြောင့် အများက လေးစားကြပြီး သိလိုတာရှိရင်လည်း အဖေကို လာမေးတတ်ကြပါတယ်. ကျွန်မတို့ ရှမ်းနီ လူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးလာဓလေ့တွေဆိုရင် ခုခေတ် လူတွေက သိပ်မသိကြတော့ ရှေ့မီနောက်မီဖြစ်တဲ့ အဖေကို လာမေးတတ်ကြပါတယ်။ အဖေဟာ အင်မတန်မှ ရိုးသားပြီး လူတွေကို ယုံလွယ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ. စိတ်ကောင်းလည်း အလွန်ရှိပါတယ်။ အခုဆို အဖေက အသက်အတော်ကြီးပြီဖြစ်လို့ အိမ်မှာဘဲ နေပါတော့တယ်။ အမေကတော့ ဘာသာတရားကို အလွန်ကိုင်းရှိုင်းပြီး သားသမီးတွေကိုလည်း သူ့အတိုင်း ဘာသာရေးကို လိုက်စားစေချင်သူပါ။ ကျွန်မကို တွေ့တိုင်းလည်း ဘုရားတရားကို မမေ့ဖို့၊ တရားထိုင်ဖို့၊ စသဖြင့် အမြဲတမ်း တိုက်တွန်းတတ်သူပါ။ ခုချိန်ထိလည်း ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်တွေကို နှစ်သက်ခုံမင်စွာ လုပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ အခါကြီး ရက်ကြီးတွေမှာ အမေရဲ့ ဘုရားစင်က ဆွမ်းတော်ပွဲဟာ ဆွမ်းခွက်ပေါင်းများစွာနဲ့ ဆွမ်းတော်တင်တတ်တဲ့ သဒ္ဓါတရားကြီးမားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်ရက်တွေမှာလည်း ဘုရားကို သက်တော်ထင်ရှား ရှိသကဲ့သို့ ဆွမ်းကပ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရဲ့ ဘုရားစင်နဲ့ အမေအကြောင်းကိုလည်း ပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ် ရေးခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။
ဘလောဂ့်လေးလုပ်ပြီး စာရေးလာတဲ့ နောက်ပိုင်း ခရီး သွားလာ ရင်း မြို့တစ်မြို့ကို ရောက်တဲ့အခါ အချိန်ရရင် ရသလို အဲဒီမြို့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့နေရာ၊ သာယာ လှပတဲ့ နေရာ၊ သမိုင်းဝင် စေတီဘုရားတွေ၊ ထင်ရှား ကျော်ကြားတဲ့နေရာတွေ ရှိရာကို ရောက်အောင် သွားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်၊ အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းလေ့ ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒါတွေကို ကျွန်မရဲ့ ဘလောဂ့်ပေါ်ကနေ အခြားသော စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေတို့ကို ပြန်လည် မျှဝေလေ့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်မ ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ မြို့တွေရဲ့ ကောင်းတဲ့ အချက်တွေ၊ သာယာ လှပပုံတွေကိုသာ ဦးစားပေးပြီး ရေးလေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မ ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ မြို့တွေလိုဘဲ ကျွန်မကို မွေးဖွား ကြီးပြင်းလာစေခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ ဒေသ အကြောင်းကိုလည်း ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေ၊ သာယာ လှပတဲ့ နေရာတွေကို ရေးချင် မိပါတယ်။ သို့ပေမဲ့လည်း ကျွန်မရဲ့ ဇာတိဒေသဟာ နာမည်ကျော်ကြားလှတဲ့ ကျောက်စိမ်းကြောင့် ရှိသမျှ တောတွေ တောင်တွေ ကုန်တော့မဲ့ အထိအောင် မြေလှန် ရှာဖွေခြင်း ခံရတဲ့ အခါမှာတော့ ဘယ်မှာလာပြီး ဟိုး ယခင် တုန်းကလို တောင် တန်း ပြာပြာတွေ သစ်တော စိမ်းစိမ်းတွေနဲ့ သာယာ လှပခဲ့တဲ့ တောရိပ်တောင်ရိပ် တို့ဟာ ခုနေခါမှာတော့ ဘယ်မှာလာပြီး စိမ်းစို လှပပါတော့မလဲရှင်.
ကျွန်မတို့ဒေသကလေးဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့် အရင်ကလို သာသာယာယာ မရှိတော့ပေမဲ့ ဘာသာ၊ သာသနာရေးမှာတော့ လက်မနှေးကြသလို၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအလှူပွဲတွေမှာ အလွန်ကို ရက်ရက်ရောရော လှူတန်းကြသလို၊ ပွဲတွေကလည်း ရိုးရာထုံးတမ်း အစဉ်အလာမပျက် ကျင်းပတာမို့ သိပ်ကို ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဒေသရဲ့ သင်္ကြန်တို့လို၊ မီးထွန်းပွဲတော်တို့လို အကြောင်းတွေကို အရင်ကလည်း ရေးခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ ကျွန်မရဲ့ မိဘနှစ်ပါးစလုံးဟာ ကချင်ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတွေ ဖြစ်ပြီး ကျွန်မတို့ဒေသရဲ့ ကျောက်စိမ်းတွင်းက မြို့ရွာ၊ နာမည်တွေ တော်တော် များများဟာ ရှမ်းနာမည်တွေကနေ ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်. ဖားကန့်ဆိုရင် ဖာ- ကျောက်ဖျာ ကန့်- ပြိုကျတာ လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ဇာတိ လုံးခင်းဆိုရင်လည်း ဆည်ကြီးတစ်ခုရဲ့ အနီးမှာ ရှိလို့ ရှမ်းလိုခေါ်တာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်မရဲ့ အဖေက ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ မှော်စီစာ၊ နမ့်မဖြစ်၊ ဆိပ်မူ၊ နမ့်စမ်း စသဖြင့် ရွာတွေဟာ ရှမ်းနာမည်တွေ များစွာ ရှိပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ ဇာတိဒေသဟာ ဖားကန့်လို့ဆိုပေမဲ့ တိတိကျကျ ပြောရရင်တော့ ဖားကန့်မြို့နဲ့ ၆မိုင်နီးပါး ဝေးတဲ့ လုံးခင်းဆိုတဲ့ ရွာကလေးဟာ ကျွန်ရဲ့ မိဘတွေနဲ့ မောင်နှမတွေ နေထိုင်ဆဲဖြစ်ပြီး ကျွန်မကို မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ရွာကလေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်စိမ်းမှော်နယ်မြေကို ရောက်တာနဲ့ ဖားကန့်ကို မရောက်ခင်မှာ ကျွန်မရဲ့ ရွာကလေးကို အရင်ဆုံး ရောက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှာ ဖားကန့်ကိုရောက်တာပါ။ ဖားကန့်ကနေ ဆက်သွားရင်
Links to this post 32 comments
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, October 27, 2011 Thursday, October 27, 2011 Labels: ကျန်းမာရေး
ကျွန်မတို့ဟာ မိမိရဲ့ အလုပ်နဲ့ အိမ်၊ အိမ်နဲ့အလုပ် နေ့စဉ် အချိန်ကုန်နေရာကနေ စိမ်းလန်းစိုပြေနေတဲ့ ပန်းခြံလို၊ ဥယျာဉ်လို နေရာမျိုးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် သစ်ပင်တွေ၊ အစိမ်းရောင် ရှုခင်းတွေ ပေါတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့တွေလို နေရာတွေကို ရောက်သွားတဲ့အခါ စိတ်ဖိစီးနေတာတွေ၊ ပန်ပင်း နွမ်းနယ်နေတာတွေ ပြေပျောက် လန်းဆန်းသွားတာကို ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒါဟာ အစိမ်းရောင် ရှိတဲ့ သစ်ပင်တွေ၊ တောတောင်တွေရဲ့ စွမ်းအားကြောင့်ပါဘဲ။ အစိမ်းရောင်ဟာ လူတွေရဲ့စိတ်ကို ကြည်လင် ချမ်းမြေ့စေနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိ ရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူကမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ လူတိုင်းဟာ မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားကို ပြုလုပ်သင့်သလို အစိမ်းရောင် လေ့ကျင့်ခန်း ဆိုတာကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အစိမ်းရောင် လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ အနည်းငယ် စိမ်းနေကောင်း စိမ်းနေပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်လည်း အကြောင်းအရာကတော့ လူတိုင်း သိပြီးသား အကြောင်းအရာသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အစိမ်းရောင်လေ့ကျင့်ခန်းက တစ်ခြားမဟုတ်ပါဘူး.. မိမိအနီးနား ဝန်းကျင်တွေမှာ ရှိတတ်တဲ့ ပန်းခြံ၊ သစ်ပင်တောအုပ်၊ ဥယျာဉ် စတဲ့ သဘာဝနဲ့တူအောင် ပြုပြင်ထားတဲ့ အပင်စိမ်းစိမ်းတွေ ရှိတတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ငါးမိနစ်ခန့်မျှ ဖြစ်စေ အနားယူ အပန်းဖြေတာမျိုး၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လုပ်ပေးတာမျိုးနဲ့ အပင်လေးတွေကို ပြုစု စောင့်ရှောက်တာမျိုးကို အစိမ်းရောင် လေ့ကျင့်ခန်းလို့ ဆိုပါတယ်။ သင်ဟာ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ မျှမျှတတ ကျန်းမာချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ခန္ဓာလေ့ကျင့်ခန်းအပြင် အိမ်အပြင်ဘက်က စိမ်းလန်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်နေ့ကို ၅မိနစ်ခန့်တော့ မဖြစ်မနေ အချိန်ပေး နေထိုင်သင့်တယ်လို့ ပညာရှင်များက အကြံပြုကြပါတယ်။ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်များအရ စိမ်းစိုလန်းဆန်းနေတဲ့ သစ်ပင်တွေရှိရာ ပန်းခြံ၊ ဥယျာဉ်၊ တောတောင်၊ သစ်တောတို့မှာ ငါးမိနစ်ခန့် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ မြင်းစီးခြင်း၊ သီးပင်စားပင်၊ ပန်းအလှပင်များ စိုက်ပျိုးပြုစုခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား ပြုလုပ်ခြင်း၊ မြစ်ချောင်း၊ ရေကန်တို့မှာ ငါးမျှားခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါက စိတ်ရဲ့ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးကို အထူးဘဲ ကောင်းမွန် တိုးတက်စေနိုင်တယ်လို့ Environmental Science and Technology မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်းဟာ အိမ်၊ ခန်းမ စတဲ့ နေရာအတွင်းမှာ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာထက် ပိုပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ အစိမ်းရောင် လေ့ကျင်းခန်းကို ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိတ် မကြည်မလင် ညစ်နွမ်း နေတာတွေကိုပါ လျော့ပါးသက်သာ စေနိုင်တာကြောင့် အစိမ်းရောင် လေ့ကျင်းခန့် ပြုလုပ်တဲ့ အလေ့အထကို ပြုစု ပျိုးထောင်သင့်ပါတယ်။ မိမိအိမ် ခြံဝင်းတွင်းမှာသော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် အနီးတစ်ဝိုက်က အစိမ်းရောင် ရှုခင်းများ၊ သစ်ပင်များရှိရာ နေရာတို့မှာ သော်လည်းကောင်း အဆင်ပြေတဲ့ နေရာမှာ အစိမ်းရောင် လေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်နိုင် ပါတယ်။ အစိမ်းရောင် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံး ပတ်ဝန်းကျင် အနေ အထားဟာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရေကန်၊ ရေအိုင်၊ မြစ်ချောင်း စသည်တို့ရှိပါက ပိုပြီး ထိရောက် ကောင်းမွန်တယ်လို့လည်း ပညာရှင်များက အဆိုပြုကြပါတယ်။ ပင်လယ် ကမ်းခြေဟာလည်း ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အကျိုးရှိစေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင်ပေါများတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ မြစ်ချောင်း၊ ရေအိုင်၊ ပင်လယ် ကမ်းခြေတို့မှာ ရှိနေတဲ့ လေထုဟာ လူနေ အိမ်ခြေ ထူထပ်တဲ့နေရာ၊ မိမိနေထိုင်တဲ့ တိုက်ခန်းလိုနေရာ၊ ကား အသွားအလာ ရှုပ်ထွေးတဲ့ နေရာတွေထက်စာရင် အများကြီး သန့်စင်နေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီလို နေရာတွေမှာ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်လည်း အဆုပ်ကို သန့်ရှင်းတဲ့လေတွေ ပိုမို ဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အဆုပ်ရဲ့ကျန်းမာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ပင်လယ်ကမ်းခြေနဲ့ ရေကန်ရေအိုင်တွေရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အစိမ်းရောင် သစ်ပင်တွေရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အချိန်ကြာကြာ နေထိုင်လေ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိလေဖြစ်သော်လည်း သင့်အတွက် အချိန်အများကြီး မဟုတ်တောင် ၅မိနစ်လောက် သွားလာ နေထိုင် လှုပ်ရှားယုံနဲ့တင် စိတ်နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ ကျန်းမာရေးအတွက် လုံလောက် မျှတစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မိမိအိမ်တွင်း၊ တိုက်ခန်း၊ စသည်တို့ရဲ့ အတွင်းထဲမှာသာ အမြဲတမ်း နေထိုင်သူများ၊ တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်စွာ နေထိုင်တတ်သူများ၊ ရယ်ဒီမိတ် အစားသောက်ကိုသာ အများအားဖြင့် စားသောက် တတ်ကြသူများထက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သစ်ပင်တောတောင်၊ ရေချောင်း၊ ရေကန်၊ ပင်လယ်ကမ်းခြေ စသည်တို့မှာ နေထိုင်သူများ၊ အုပ်စုအဖွဲ့များ၊ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများဖြင့် လှုပ်ရှားသွားလာ တတ်ကြသူများ၊ အသီးအနှံ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တို့ကို စားသောက်တတ်ကြသူများဟာ ကျန်းမာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အစိမ်းရောင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်များအတွင်းက အိမ်
အချိန်မရှိလို့၊ အလုပ်များလို့ စသဖြင့် ဆင်ခြေပေးကောင်း ပေးကြပါလိမ့်မယ်။ အချိန်များများ မဟုတ်ပါဘူး။။ ငါးမိနစ်လောက် နေ့စဉ်အချိန်ပေးပြီး အစိမ်းရောင် လေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ စိတ် အခြေ အနေဟာ သိသိသာသာ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ ရုံးကို ကားနဲ့ သွားတတ်သူတစ်ဦးဟာ မိမိရဲ့ကားကို ရုံးနဲ့ မိုင်ဝက်ခန့်ဝေးတဲ့နေရာမှာ ပါကင်ထိုးပြီး မိုင်ဝက်ခန့် လမ်းလျှောက်ပေးခြင်း၊ နေ့လည်စာ စားချိန်ကိုလည်း မိမိကွန်ပျူတာဘေးမှာ စားသောက်ခြင်း၊ အလျင်စလို စားသောက်ပြီး အလုပ်ထဲ အမြန်ပြန်ဝင်ခြင်းထက် မိမိကို ပေးထားတဲ့အချိန်မကုန်မချင်း ပြင်ပ ဝန်းကျင်ကို ထွက်ပြီး လေညှင်းခံခြင်း၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အလှအပများကို ခံစားခြင်း၊ မိမိကလေးကို ကျောင်းပို့ကျောင်းကြို ပြုလုပ်ရာတွင် အိမ်မှ ကျောင်းသို့ တောက်လျောက် ကားမောင်း သွားခြင်းထက် ပန်းခြံ၊ ရေကန်တို့ရှေ့မှာ ခေတ္တခဏ ရပ်နားပြီးမှ သွားခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အုပ်စုလိုက် green exercise ပြုလုပ်နေကြပုံ
Jules Pretty နဲ့ Jo Barton တို့နှစ်ဦး သိပ်မကြာခင်ကမှ သုတေသန ပြုလုပ်ထားတဲ့ လေ့လာချက် ဆယ်ခုမှာ လူပေါင်း ၁၂၅၂ဦးကို ဆန်းစစ် လေ့လာချက်များ အရ အစိမ်းရောင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လေ့ကျင့် ခန်း ပြုလုပ်ခြင်းဟာ မူလထက် စိတ်ကြည်လင် ငြိမ်းချမ်းမှု ပိုမို ရရှိလာတယ်၊ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ကျန်းမာရေး လည်း ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အစိမ်းရောင် သစ်ပင်တွေ များများရှိတတ်တဲ့ နေရာမျိုးတွေမှာ မိမိ တစ်ဦးတည်းသော်လည်းကောင်း၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း၊ အစုအဖွဲ့များနဲ့ သော်လည်းကောင်း ခဏတာ လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ကြခြင်းဟာ ငွေကုန်ကြေးကျ မများလှတဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဖြစ်ပါတယ်။။ အစိမ်းရောင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လှုပ်ရှား သွားလာ နေထိုင်ခြင်းအားဖြင့် မိမိ အလုပ်ကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဘဝ နေထိုင် မှုကြောင့် သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း သူတစ်ပါးအပေါ် မကျေနပ် ဒေါသ ကြီးခြင်း၊ မနာလိုစိတ် များပြားကြီးမားခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေး စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း စသည်တို့ကို လျှော့ချပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားလှတဲ့ အစိမ်းရောင် လေ့ကျင့်ခန်းကို ကျွန်မတို့အနေနဲ့ တတ်အားသမျှ လုပ်ဆောင်ကြည့်ကြပါစို့လားနော်။
Ref: Dr. Jo Barton ( The benefits of green exercise )
Jo Barton, Jules Pretty (What is the Best Dose of Nature and Green Exercise for Improving Mental Health? )
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, October 25, 2011 Tuesday, October 25, 2011 Labels: ဖားကန့်မှော်နယ်မြေအကြောင်းများ
ကျွန်မတို့ ဖားကန့်မှာ ရေမဆေးကျောက် ရှာဖွေကြတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ် မဟုတ်တောင် အကြမ်းဖျဉ်းတော့ အရင်တုန်းကလည်း ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဖားကန့်ဒေသခံများသာမက မြန်မာပြည် အနှံ့အပြားက လူငယ်လူရွယ်တို့ရဲ့ စိတ်ကူး အိပ်မက်တွေ ဖြစ်မြောက်အောင် ရှာဖွေကြရာ အခန်းကဏ္ဍဟာ ဖားကန့် ရေမဆေး ကျောက်များ ရှာဖွေခြင်း ဟာလည်း ကဏ္ဍတစ်ခု အနေနဲ့ ပါဝင်ပါတယ်။ ငွေအရင်းအနှီး မလိုဘဲ မြေစာပုံပေါ်မှာ ကျောက်ကောင်း တစ်လုံး တစ်လေလောက် ကောက်ရရုံနဲ့ ငွေဝင်နိုင်တဲ့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်တာကြောင့် ဖားကန့် ဒေသမှာ ရေမဆေးကျောက် ရှာဖွေကြတဲ့ သူတွေ လက်ညိုးထိုး မလွဲလောက်အောင် များပြားလှပါတယ်။ “ နိုင်ငံခြား မထွက်နိုင်ရင် ဖားကန့်တက်” လို့တောင် ပြောစမှတ်ရှိလောက်အောင် စိတ်ကူးတွေကို အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည် ဖော်ပေးနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် လူတိုင်းရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို အကောင်အထည် ဖော်ပေးနိုင်ရဲ့လား ဆိုတာနဲ့ ရေမဆေးကျောက် ဘယ်လိုများ ရှာကြသလဲဆိုတာ တစေ့တစောင်း လေ့လာကြည့်ရရင်ဖြင့်...
ရေမဆေးကျောက် ရှာသူများ ပွဲတော်တမျှ များပြားလှ
ရေမဆေးရှာဖို့ အားမာန်အပြည့်၊ မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့ ချီတက်နေကြတဲ့ လူငယ်အချို့
ရေမဆေးကျောက် ရှာသူတွေဟာ လုပ်ကွက် အသီးသီးက စွန့်ပစ်တဲ့ မြေစာပုံတွေ ပေါ်မှာ လိုက်လံ ရှာဖွေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်… မြင့်မားလှတဲ့ တောင်ကြီးတွေဖြိုဖျက်ပြီးမှ ကျောက်စိမ်းတွေ ရှာဖွေကြမှတော့ အဲဒီဖြိုဖျက်လိုက်တဲ့ မြင့်မားလှတဲ့ တောင်တန်းတွေကထွက်လာတဲ့ မြေကြီးတွေကို စွန့်ပစ်ဖို့နေရာဟာ ဖားကန့်ဒေသမှာ အကြီးအကျယ် လိုအပ်ချက်ဖြစ်လာပါတယ်။ ချောင်းဘေးနားမှာ၊ လူနေအိမ်တွေနားက မြေကွက်တွေမှာ၊ အလွယ်တကူ စွန့်ပစ်ကြတဲ့အတွက် မြေအနေအထား ပြောင်းလဲမှု အများဆုံး ဒေသတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လက လမ်းတွေရှိနေပေမဲ့ နောက်လလောက်မှာ လမ်းတွေ မရှိတော့ဘဲ ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက်တွေကြောင့် ချိုင့်တွေ ကျင်းတွေဖြစ်ကုန်ရတာတွေ၊ ချောင်းနားဘေးက စွန့်ပစ်မြေစာတွေကြောင့် ချောင်းရေစီးဆင်းမှု ပိတ်ဆို့ပြီး မိုးတွင်းအခါမှာ အကြီးအကျယ် ရေကြီးပြီး လူထုတွေ ဒုက္ခရောက်ကြရတာတွေဟာ စာဖွဲ့မကုန်တဲ့ ဒုက္ခတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေဘေးကာကွယ်ရေးဆိုပြီး ချောင်းကမ်းဘေးတွေမှာ မြေကြီးတွေ အပုံလိုက် အပုံလိုက် လာပစ်ကြပြီး နောက်နှစ်မိုးတွင်းမှာဘဲ ဖားကန့်ဒေသမှာ မကြုံစဖူး ရေကြီး ရေလျှံပြီး များစွာ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်ပါတော့တယ်။ မြေကြီးတွေ လာဖို့လိုက်လို့ ချောင်းအရွယ်အစား ကျဉ်းမြောင်းသွားပြီး မိုးရွာလို့ ချောင်းရေတိုးတဲ့အခါ ရေတွေစီးဆင်းဖို့နေရာ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း မရှိတော့တာကြောင့် လူနေ အိမ်ခြေ ရပ်ကွက်တွေထဲ မတန်တဆ ဝင်ရောက်လာကြပါတော့တယ်။ ဒီပြဿနာဟာ လုပ်ကွက်တွေရဲ့ စွန့်ပစ်မြေစာတွေကြောင့် ချောင်းကောပြီး ရေကြီးရတာဖြစ်တာကြောင့် စနစ်တကျ မဖြေရှင်းရင် နောင်နှစ်တွေမှာ ပိုပြီးဆိုးဝါးလာမဲ့ အခြေအနေ ရှိပါတယ်။
ဒီလို မြေစာပုံကြီးတွေမှာ သက်စွန့်ဆံဖျား ကျောက်စိမ်းရှာသူများ
ရေမဆေးကျောက် ရှာဖွေပုံအကြောင်း ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, October 23, 2011 Sunday, October 23, 2011 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မြီးရှည်အခြောက်တွေ လက်ဆောင်ယူလာပေးတာနဲ့ ဒီရက်ပိုင်း ထမင်းမစားဘဲ မြီးရှည်ဘဲ တစ်နေကုန်စားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မလုပ်စားဖြစ်တဲ့ ဝက်နံရိုး မြီးရှည် လုပ်နည်းလေး ပြန်လည် မျှဝေချင်ပါတယ်ရှင်။ အင်မတန်မှ လွယ်ကူပြီး အဆာပလာလည်း များများ မလိုဘဲ စားလို့ကောင်းတဲ့ မြီးရှည် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ ဝက်နံရိုးမြီးရှည်လုပ်စားဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အဆာပလာများဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကို ရှင်းပြရရင်...... ဆီတိုဖူးကို ဆီသတ်ပြီး ရေကျဲကျဲနဲ့ ဖျော်ထားတာပါ။
ကြာညှို့လို့ခေါ်ပါတယ်။ အိမ်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူမရှိရင် ထန်းညက်ကို အရည်ဖျော် ဆားထည့်ပြီး ပျစ်လာအောင် ချက်လိုက်ရင် ကြာညှို့ ရပါပြီ။
ဒါကတော့ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နံနံတို့ကို နှုတ်နှုတ်စင်းပြီး ရေဖျော်ထားတာပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်းထည့်ပြီး ဝက်နံရိုးကို နူးနေအောင် ဟင်းရည်ချက်ထားတာပါ။
ပြုတ်ပြီး မြီးရှည်ထဲကို အပေါ်က အဆာပလာနဲ့ ဆား၊ အရသာမှုန့်တို့ကိုထည့်ပါတယ်။
မြီးရှည်နဲ့ တွဲစားဖို့ မုန်ညှင်းချဉ်
ဒီမြီးရှည်ဟာ အဆာပလာ မများပေမဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ အတော်ကို စားကောင်းပါတယ်။ ဒီနည်းကိုတော့ ကျွန်မ ဗန်းမော်သွားတုန်းက ရလာတဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗန်းမော်မြီးရှည်လို့လည်း ခေါ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။
နောက်တစ်ကြိမ် လုပ်စားဖြစ်တဲ့ မြီးရှည် ကတော့ ဝက်သားကို နူးအောင်ပြုတ်ပြီး ချက်ထားတဲ့ မြီးရှည်ပါ။ လိုအပ်တဲ့ အဆာပလာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဆာပလာများ။ အဆာပလာတွေကတော့ အပေါ်က အဆာပလာများနဲ့ သိပ်မထူးပါဘူး။
ဝက်သားကို အဆီအသားအခေါက်များပါတဲ့ သုံးထပ်သားကို ညကတည်းက နူးနေအောင်ပြုတ်ထားပါတယ်။ (ညသန်းကောင် ရိုက်ထားတာမို့ မွဲတဲတဲဖြစ်နေပါတယ် :P )
မနက်ရောက်တော့ ပြုတ်ထားတဲ့ ဝက်သားတွေကို ဆယ်ပြီးတောက်တောက်စင်းလိုက်ပါတယ်။
ဝက်သားများကို ဟင်းရည်အနည်းငယ်နဲ့ ရောပါတယ်
အပေါ်က မြီးရှည်လုပ်နည်းအတိုင်းပါဘဲ။ ဆီတိုဖူးကို ဆီသတ်ပြီး အရည်ဖျော်ထားတာပါ။
ရှောက်ကော၊ ပါးကောနဲ့ နှမ်းရောထားတဲ့ ဆီမွှေး
အပေါ်က အဆာပလာတွေ အကုန်ထည့်ပါတယ်။
ဟင်းရည်ထည့်လိုက်ပြီး ဆား၊ အရသာမှုန့်တို့ကို မိမိနှစ်သက်သလိုထည့်ပါ။ အရည်နဲ့ မြီးရှည်
ဒီမြီးရှည်ကတော့ ကျွန်မတို့ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား မိုးကောင်းတို့က ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းလေ့ရှိတဲ့ ချက်နည်း တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အထက်ပါ ချက်နည်း ၂မျိုးစလုံး ကချင်ပြည်နယ် မြီးရှည် ချက်နည်းများဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြီးရှည်စားတဲ့ည လို့ နာမည်ပေး ရတာက နေ့ရောညပါ ထမင်း မစားဘဲ မြီးရှည် တစ်နေကုန် စားဖြစ်တာကြောင့် မြီးရှည်စားတဲ့ ညလို့ ပေးလိုက်တာပါ။
ဖြည့်စွက်ခြင်း။ ၊။ ချောက်ကောပါးကော မသိသူများအတွက် ဖြည့်စွက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
၁၃။ ချောက်ကော = Chinese Cardamon
ရှောက်ကောကို မြန်မာလို ဖာလာစေ့လို့ခေါ်လို့ရမယ် ထင်ပါတယ်.. သူက ဖာလာစေ့ အကြီးတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေသုံးတဲ့ ဖာလာစေ့က သေးပါတယ်.. ဒီဖာလာစေ့ကတော့ အတော်ကြီးပြီး အရွယ်က တစ်လက်မ နီးပါး ရှိတတ်ပါတယ်။ တရုတ်ဖာလာစေ့လို့ ခေါ်ရမယ်ထင်ပါတယ်။
၁၄။ ပါးကော = Star Anise
တရုတ်လို ပါးကောခေါ်ပေမဲ့ မြန်မာလို နာနတ်ပွင့်လို့ ခေါ်ပါတယ်.. ဟင်းထဲ ထည့်တဲ့အခါ ဆွတ်ပြုတ် တို့၊ ဟော့ပေါ့တို့မှာ ဒီ၂မျိုးလုံးကို အလုံးလိုက်ထည့်ကြပေမဲ့ မာလာဟင်းတို့လို ဟင်းတွေမှာတော့ အမှုန့်ကို ထည့်ပါတယ်..
အသားပြုတ်တဲ့အခါမှာ အထက်က ၂မျိုးကို အလုံးလိုက် ၂လုံး ၃လုံးစီခန့် ထည့်ပြီးတော့ ဆီချက်ချက်တဲ့အခါမှာတော့ အဲဒီနှစ်မျိုးရဲ့ အမှုန့်ကို အသုံးပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်.. အလုံးလိုက် ဝယ်လာပြီးလည်း မိမိကိုယ်တိုင် အမှုန့်ကြိတ်လို့ ရသလို၊ အမှုန့်လုပ်ပြီးသားကိုလည်း အာရှ ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
ချောက်ကောပါးကော ဆီချက်ချက်ဖို့ကတော့ အပေါ်က အမှုန့်နှစ်မျိုးကို ဆီပူပူမှာ ခဏလောက် ချက်လိုက်ရင် အနံ့လေး မွှေးနေတဲ့ ချောက်ကောပါးကော ဆီချက် ရပါပြီ။ အမှုန့်မရှိပါက အလုံးလိုက် ကိုလည်း ဆီပူပူမှာ ခေတ္တကြော်လိုက်ရင် ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ချောက်ကော ပါးကောဆီချက် သီးသန့် ရပါပြီ။ ဆီကျက်ချိန်မှာ နှမ်းလေးတွေ ထည့်ပြီးချလိုက်ပါကလည်း ချောက်ကောပါးကောနဲ့ နှမ်းဆီမွှေးအနံ့မွှေးနေတဲ့ ဆီချက်ကို ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးအတွက် ပျော်စရာ တနင်္ဂနွေနေ့လေး ဖြစ်ပါစေရှင်...
My Homemade Basque Burnt Cheese Cake.....